ကောလိပ် Freshman တေလာ Behl ၏အလွမ်းလူသတ်မှု
တေလာ Behl ဖို့ဘာဖြစ်သွား?
တေလာ Behl, Richmond အတွက်ဗာဂျီးနီးယားဓနသဟာယတက္ကသိုလ်တွင် 17 နှစ်အရွယ် freshman, သူမ၏ရည်းစားနှင့်အတူသူမ၏အခန်းဖော်အချို့ privacy ကိုပေးစေခြင်းငှါစက်တင်ဘာ 5, 2005 သူမ၏အဆောင်ကအခန်းထားခဲ့တယ်။ သူမသည်သူမ၏အတူဆဲလ်ဖုန်းအချို့ငွေသား, ကျောင်းသားတစ်ဦး ID နှင့်သူမ၏ကားသော့ကိုယူ။ သူမသည်နောက်တဖန်အသကျရှငျတစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးခဲ့သညျ။
နှစ်ပတ်အကြာတွင်သူမ၏ 1997 Ford ကားအစောင့်ခိုးယူအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်လိုင်စင်ပြားနှင့်အတူ VCU ကျောင်းဝင်းထဲကနေတစ်မိုင်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲရှာတွေ့ခဲ့သည်။
သူမ၏ခန္ဓာကိုယ်အောက်တိုဘာ7ရက်နေ့တွင် 75 မိုင်အရှေ့ Richmond ၏မြေ၌တစ်ထစ်အတွက်ရှာတွေ့ခဲ့သည်။
တေလာမာရီ Behl ရဲ့ငယ်ဘဝနှစ်များ
တေလာ Behl, Matt နဲ့ Janet Behl (ယခု Janet Pelasara) ကိုအောက်တိုဘာလ 13, 1987 ရက်တွင်မွေးဖွားခဲ့သည်။ အသက်အရွယ်ငါးခုအသုံးပြုပုံတေလာရဲ့မိဘတွေကွာရှင်းနှင့် Janet တစ်တော်ဝင်လေတပ်အရာရှိနောက်အိမ်ထောင်ပြုခဲ့လေ၏။ သူမနှင့်သူမ၏သစ်ကိုခင်ပွန်းနဲ့တေလာအင်္ဂလန်နှင့်ဘယ်လ်ဂျီယံ၌နေ၏။ တေလာသည်ခြောက်၏အသက်အရွယ်ရှေ့တော်၌ဝါရင့်လေကြောင်းလိုင်းခရီးသည်တင်ဖြစ်လာခဲ့သည်, 11 များ၏အသက်အရွယ်အားဖြင့်ဥရောပနှင့်အမေရိကန်အကြား unescorted အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာခရီးစဉ်အောင်, တေလာရဲ့အမေကိုတဖန်ကွာရှင်းထိုသူနှစ်ယောက်မြောက်ပိုင်းဗာဂျီးနီးယားသို့ပြန်ရောက်ခဲ့သည်။
တေလာ Behl လူကြိုက်များ, တော်တော်ကြီးနှင့်ကောင်းမွန်စွာခရီးထွက်ခေတ်မီတစ်ဦးလေကြောင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သူမကောင်းစွာပယ်အတွက် Madison High School တွင်ဝါရှင်တန်ဒီစီ, ဗီယင်နာ, ဗာဂျီးနီးယားအိပ်ခန်းအသိုင်းအဝိုင်းထံမှဘွဲ့ရလာသောအခါသူမသည်အသက် 17 နှစ်အားဖြင့်ပြည်ပမှာ 15 ကွဲပြားခြားနားသောကျောင်းများသို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည်အခြေခံပြီး Richmond, ဗာဂျီးနီးယားမှာကောလိပ်၏သူမ၏ပထမနှစ်တွင်တက်ရောက်ခြင်း၏သူမ၏လာမယ့်ဘဝစွန့်စားမှုများအတွက်သူမ၏ပြင်ဆင်မည်မယ်လို့တစ်ပါးရည်နပ်ရည်လွတ်လပ်ရေးဖွံ့ဖြိုးဘဲလျက်၏မျက်နှာကိုသယ်ဆောင် ဗာဂျီးနီးယားဓနသဟာယတက္ကသိုလ် (VCU) ။
Janet Pelasara တေလာဘာလို့လဲဆိုတော့သူမကယင်း၏ 30000 ကျောင်းသားတွေနဲ့အတူကောလိပ်မှာတှေ့ရမညျ့မတူကွဲပြားမှု၏ VCU ရွေးချယ်ထားသည့်ဟုဆိုသည်။ ကိုယ်ကသာတစ်နာရီခွဲကြာကွာသူမ၏မိခင်နှင့်ဖခင်နှစ်ဦးစလုံးထံမှတည်ရှိသောလုံခြုံရွေးချယ်မှုနှင့်တူသလိုပဲ။ အခြားအကောလိပ်-ခညျြနှောငျကျောင်းသားများကိုထောင်ပေါင်းများစွာ၏ ပြု. , အနောက်ပင်မစိန့်ပေါ်သည်ဝမ်းမြောက် Residence အိပ်ဆောင်မှာသူမ၏သစ်ကိုအိမ်သို့ခေါင်းနှစ်လုံးအဖြစ် 2005 ခုနှစ်သြဂုတ်လ, အသက် 17 မှာတေလာ Behl, သူမ၏ဥစ်စာရှိတက်ထုပ်ပိုး
တေလာရဲ့အင်တာနက်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး - "ခါးသီးသော"
တေလာ Behl ရဲ့ဘဝတစ်ခုမှာအရေးပါသော Myspace.com အပေါ်သူမ၏ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီကိုမိမိတို့အဘို့ profile များကိုဖန်တီးကာလူမှုရေး-type အမျိုးအစားပတ်ဝန်းကျင်တွင်အခြားသူများနှင့်ဆက်ဆံနိုင်အောင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
သူမက 2005 ခုနှစ်နွေရာသီကာလအတွင်း created တေလာ Behl ရဲ့ပရိုဖိုင်းကိုတွင်သူမက "ခါးသီးသော" ဟုအဆိုပါအမည်ဖြင့်အသုံးပြု posted: ။ "ကျနော့်ကိုအထက်တန်းကျောင်းမှဘွဲ့နှင့်ယခုငါကောလိပ်ကျောင်းများအတွက် Richmond မှပယ်တယ်ငါဖြစ်ကြောင်းကိုလူတွေတွေ့ဆုံဖို့မျှော်လင့်တယ် Richmond တှငျငါသာချအဲဒီမှာအနည်းငယ်ကလူကိုသိသောကြောင့်။ " နောက်ပိုင်းတွင်သူမ၏ profile ထဲမှာသူမက "ကျွန်မ? ကြင်နာသောသူတစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းချင်ပါတယ်ဘယ်သူသည်။ " ကဆက်ပြောသည် တေလာ site ပေါ်တွင်မှန်မှန် posted နှင့် VCU နေစဉ်အချိန်အတွင်းအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆက်ပြောသည်။
တေလာဘင် Fawley တွေ့ဆုံ
တစ်ဦးအလားအလာကျောင်းသားအဖြစ် VCU နိုင်ငံတွေကိုခရီးလှနေချိန်မှာတေလာ၏မိဘများထံသို့အမည်မသိ, တေလာ, ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 ခုနှစ်တွင်လူတတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူကဘင် Fawley လူငယ်ကောလိပ်မိန်းကလေးငယ်များချိန်းတွေ့တဲ့သမိုင်းရှိခဲ့သူတစ်ဦးက 38 နှစ်အရွယ်အပျော်တမ်းဓာတ်ပုံဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတေလာနှင့် Fawley တွေ့ဆုံပြီးနောက်အွန်လိုင်းမှချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးယုံကြည်နှင့်ဆက်ဆံရေးတစ်ချိန်ချိန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြစ်လာခဲ့သည်ဖြစ်ပါတယ်။ တေလာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဆက်ဆံရေးကိုအဆုံးသတ်, ဒါပေမယ့်သူမ VCU ရောက်လာသည့်အခါ၎င်းတို့၏ချစ်ကြည်ရေးဆက်လက်သည့်အခါသို့မဟုတ်ပါလျှင်ကိုရည်မှတ်ပဍိပက္ခအစီရင်ခံစာများရှိပါတယ်။
စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့တွင်တေလာအားလပ်ရက်တနင်္ဂနွေကိုကျော်ဗီယင်နာမြို့တွင်သူမ၏မိသားစုသွားရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက် Richmond သို့ပြန်သွား၏။ သူမသည်သူတို့ကိုသူမနောက်ကျောကဖန်ဆင်းသိစေရန်သူမ၏မိဘများကိုခေါ် လုံခြုံစွာ VCU ။ သူမသည်ထို့နောက်ဟောင်းရည်းစားနှင့်အတူအဆိုပါကျေးရွာကဖေးမှာညစာရှိခဲ့ပါတယ်။ ယင်းနောက်တေလာသူမ၏အိပ်ဆောင်အခန်းပြန်ရောက်ပေမယ့်သူမ၏အခန်းဖော်နှင့်သူမ၏ရည်းစား privacy ကိုပေးစေခြင်းငှါထားခဲ့၏။ သူမ၏ကားသော့, ဆဲလ်ဖုန်း, ကျောင်းသား ID နှင့်အနည်းငယ်ငွေသားနှင့်အတူ, သူမကတစ်ခုတည်းသောစကိတ်သွားခဲ့ပါသည်ပြန်သုံးနာရီအတွက်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူမ၏အခန်းဖော်ကိုပြောသည်။
တေလာ Behl နောက်တဖန်အသကျရှငျတစ်ခါမျှမတွေ့ဖူးခဲ့သညျ။ ဒါဟာတေလာရဲ့အခန်းဖော်တစ်ဦးပျောက်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်များအတွက် VCU ကျောင်းဝင်းရဲသတင်းပို့လုပ်ကြောင်း, စက်တင်ဘာ7သည်အထိမဟုတ်ခဲ့ပေ။ စက်တင်ဘာ 15 ရက်နေ့တွင် Richmond ရဲတပ်ဖွဲ့ကျော် ယူ. FBI ကအေးဂျင့်များအပါအဝင် 11 ဦးပါလုပ်ငန်းတာဝန်အင်အား, ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ကျောင်းသားကိုကူညီရှာဖွေဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။
စက်တင်ဘာ 17, 2005: တေလာရဲ့ကားတစ်ဦး 1997 အဖြူရောင် Ford ကားအစောင့်, ကျောင်းဝင်းထဲကနေလုနီးပါးတစ်မိုင်နှင့်တစ်နှစ်ခွဲသော့ခတ်ပြီးတိတ်ဆိတ်ရပ်ကွက်အတွင်းလမ်းပေါ်မှာရပ်ထားရှာတွေ့ခဲ့သည်။
အဆိုပါလိုင်စင်ပြားနှစ်လအစောပိုင်းက Richmond အတွက်ခိုးယူအစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ကြောင်းအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြားမှ switched ခဲ့သညျ။ ထိုဒေသတွင်အိမ်နီးချင်းများကားရှိတေလာပျောက်ဆုံးခဲ့သည်တစ်ခုလုံးကိုအချိန်မပြဘူးသည်ရဲတပ်ဖွဲ့သို့ပြောကြားခဲ့သည်။
တစ်ဦးက K-9 ခွေးကားနှစ်ခုကွဲပြားရနံ့တက်ခူး။ တဦးတည်းတေလာနှင့်အခြား 22 နှစ်အရွယ်ယေရှဲ Schultz ပိုင်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးမေးမြန်းစဉ်အတွင်း Schultz တေလာ သိ. ငြင်းဆိုနှင့်သူမ၏ကားထဲတွင်ဖြစ်ခြင်းအစဉ်အဆက်ငြင်းဆိုထားသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့သူ၏နေအိမ်တွင်တစ်ရှာဖွေရေးကာလအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်သူဟာမူးယစ်ဆေးအပိုင်အပေါ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။
စက်တင်ဘာလ 21, 2005 တွင်ရဲကြောင်း 38 နှစ်အရွယ်အစီရင်ခံဘင် Fawley တေလာအသက်ရှင်လျက်ကြည့်ရှုရန်နောက်ဆုံးလူသိများလူများ၏တဦးတည်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Fawley တေလာတစ်ဦးစကိတ်စီးချေးကူးရောက်ကြောင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့သို့ပြောကြားခဲ့သည်မိမိနေအိမ်၏ရဲရှာဖွေရေးစဉ်အတွင်း 9:30 pm တွင်လှည့်ပတ်သူမ၏အိပ်ဆောင်မှသူမ၏ကျောလမ်းလျှောက်, ရဲရှာဖွေတွေ့ရှိ ကလေးညစ်ညမ်း သူ 16 ကလေးညစ်ညမ်းစွဲချက်အပေါ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ Fawley နှစ်ခုမိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးဖခင်ရုံးထုတ်နှင့်မျှမတို့နှောင်ကြိုးနှင့်အတူထောင်ဒဏ်ဆက်လက်ရှိနေရန်အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။
အောက်တိုဘာလ 5, 2005 တွင်: Fawley ရဲ့ဟောင်းရည်းစား Fawley ရဲ့အင်တာနက်ကို web sites များ၏တဦးတည်းအပေါ်ပြသတဲ့ဓာတ်ပုံရှိအိမ်တစ်အိမ်မှရဲများကဦးဆောင်ခေါ်သွားပါတယ်။ တည်နေရာသူမ၏မိဘ၏ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးဟောင်းလယ်ယာဖြစ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါရဲဝေးလံခေါင်သီ Mathews ကောင်တီလယ်ယာရှာဖွေမြေ၌တစ်ထစ်အတွက်တင်သောတေလာ Behl ၏ပြိုကွဲပျက်စီးခန္ဓာကိုယ်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
တေလာ Behl အောက်တိုဘာလ 14, သူမအသက် 18 လှည့်ကြလိမ့်မည်ဟုပြီးနောက်နေ့၌သင်္ဂြိုဟ်လေ၏။
ဘင် Fawley ဒုတိယအ-ဒီဂရီလူသတ်မှုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခြင်း
ဖေဖော်ဝါရီလ, 2006 ဘင် Fawley တေလာ Behl ၏ဒုတိယဒီဂရီလူသတ်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သြဂုတ်လမှာတော့သူကတစ်ဦးဝင်ရောက်ပြီးနောက်အကျဉ်းထောင်တွင်အနှစ် 30 ထောင်ဒဏ်ခဲ့သည် Alford အသနားခံ သူအပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံဘူးဆိုလိုတာကအမှုအတွက်, ဒါပေမယ့်အစိုးရရှေ့နေတွေဟာရာဇဝတ်မှုများ၏သူ့ကိုပြစ်ဒဏ်ချဖို့လုံလောက်တဲ့သက်သေအထောက်အထားရှိခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်။
လူအားလုံးတို့သည် Ford ကား Mustang GT ကို CS အကြောင်း
Mabon ဟင်းချက် & ချက်ပြုတ်နည်း
သင်ကသေနတ်လွှဲပြောင်း Denied ခံရနိုင်သလားအကြောင်းရင်းများ
အဆိုပါအသက် 15 အကောင်းဆုံးတုတ်ဓား, Movies
သီအိုရီစားပေးပါနှင့် Reactant စမ်းသပ်ခြင်းမေးခွန်းများကန့်သတ်
Lewis က & Clark ကကောလိပ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
အရီဇိုးနား GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ၏တက္ကသိုလ်
မှန်မှန်ကန်ကန်ပြင်သစ်စကား '' au '' ဟုစီရင်ဖို့သင်ယူပါနှင့် '' Eau ''
မက္ကဆီကန်တော်လှန်ရေး: Celaya ၏တိုက်ပွဲ
Noble gases ဖြစ်သော Form ကိုဓာတုဒြပ်ပေါင်းများမှာပါသလား
တက္ကသိုလ်ရှိ Dallas ၏အဆင့်လက်ခံရေး
ရိုးရာကို Magic အတွက်အိုးစာလုံးပေါင်း
10 $ 10000 လက်အောက်တွင်ဂရိတ်ခရီးသွားလက်မှတ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်
ဘာ Reflexology တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲစဉ်အတွင်းမျှော်လင့်ရန်
Lug-ဗဟိုပြုဘီး vs. hub-ဗဟိုပြု
Uthman dan Fodio နှင့် Sokoto အစ္စလမ်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့